Hanaovana Topimaso Mahafinaritra An’i Nepal-n’ny Taonjato Faha 20, Jereo Ny ‘Nepal in Pix’ (Nepal An-tsary) Ao Amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jona 2016 13:28 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, नेपाली, Español, English
Ireo mpibata, mitondra ny fiarakodia voalohany indrindra ho any amin'ny Lohasaha Kathmandu. Sary tamin'ny Twitter/NepalInPix
Nandritra ny tantara, tanin'ny mistery i Nepal ho an'ireo mpitsangatsangana avy any ivelany. Ilay Himalaya avo miaraka amin'ireo tendrombohitra avo indrindrany manerantany, ao anatin'ireo havoana sy lohasaha maro miaraka amin'ireo fomba fanao sy fombandrazana tsy fahita, ary lemaka rakotra ala mikitroka any atsimo misy bibidia maro no nanintona foana ireo mpitsidika liana amin'io firenena saro-dàlana io.
Na dia voakasiky ny fandrosoana maoderina aza i Nepal, mitondra anao any amin'ny tany hafa mihitsy ireo sary avy amin'ireo am-polo taonany monja tany taloha. Mamoaka ireo sary tamin'izany vanimpotoana izany ny kaonty ao amin'ny Twitter, Nepal in Pix, maneho ny endriky ny fiainana tsy dia ela akory izay.
Hanombohana izany, ito ny sarin'ireo fanadinana nampanaovin'ny Kaomisionan'ny Asam-Panjakàna (Lok Sewa Aayog) tao Nepal, ny fomba fidirana amin'ny asan'ny governemanta, izay atao eny ampovoan-tokontany tao amin'ny Distrikan'i Lamjung, Andrefan'i Nepal.
Ireo tanora Nepale manao fanadinana Lok Sewa Aayog eo amin'ny tany mainandron'i Lamjung ny taona 1975.
Zavatra tsy fahita tamin'ny taona 1980 ny fahitalavitra. Ito sary ito mampiseho ireo tovolahy miaraka amin'ny fahitalavitra iray, maka sary eo amin'ireo lalankelin'ny Lohasaha Kathmandu.
Ireo tovolahy Newar mitondra mody ny fahitalavitrany voalohany, ny taona 1987.
Tamin'ny taona 1960, nandeha tany amin'ny Lohasaha Kathmandu ireo “hippies”. Ara-dalàna ny fivarotana ny rongony sy “hashish” (karazana rongony) teto, ary na ny làlana manakaiky ny Kianja Durbar ao Kathmandu aza nomena anarana hoe ‘Làlana Mampitahotra’.
Ara-dalàna ny rongony tany Nepal nandritra ny taona 1960
Mampiseho ny endriky ny fety tany Kathmandu tamin'izany andro izany ny sary eto ambany, ahitàna ny lamaody nalaza teo amin'ireo tanora:
Fotoanan'ny fety toy ny tamin'ny taona 1969.
Raha mbola nanjaka ny fanjakan'olon-tokana, natao ho toy ny ilon'ny fanantenàna ny mpanjakalahy sy mpanjakavavy, ary miandry amin'ny filaharam-be ireo vahoaka mba hanopy maso ireo mpitondra.
Ireo vahoaka miandry ny fahatongavan'ny mpanjakalahy sy mpanjakavavy ao Jumla Bazaar ny taona 1978.
Tena vaovao tokoa miaraka amin'ireo fiara vitsy manodidina, ilay làlana Vaovao mitondra ho any Kathmandu Durbar Square ao afovoan'i Kathmandu.
Làlana Vaovao, Kathmandu, 60 taona lasa.
Tsy fahita firy ho an'ny sarambabem-bahoaka ny fiarakodia, izay fananan'ny manankarena sy manampahefana, ary toy izany koa ireo mpivarotra fiarakodia. Mampiseho ny iray amin'izany mpivarotra fiarakodia izany ny sary eto ambany:
Fiarakodia taloha! ilay mpivarotra fiarakodia Ford tao Lazimpat, Kathmandu ny taona 1930.
Raha niroso ho amin'ny vaninandro maoderina ny Lohasaha Kathmandu, mbola ala mikitroka kosa ireo lemaka atsimo, ary paradisa ho an'ireo mpihaza sy ireo vahinin'ny fianakavian'ny mpanjaka. Avy tamin'ilay haza nalazan'ny mpanjaka, niaraka tamin'ireo vahiny, mpanjaka Britanika, mamono bibidia maro, ity sary eto ambany ity.
Ny mpanjaka George V miaraka amin'ny haza ny andron'iny, ny Desambra 1911. Ny tontalin'ny novonoina : tigra 39, tokantandroka 18 ary bera 4.
Nitazona ny fahefana teo am-pelatanany efa ho 104 taona, hatramin'ny taona 1951, ny foko Rana niavian'ireo praiminisitra nitàna ny fahefana, nampietry ireo mpanjaka ho endrika famantarana nandritra ny fitondran'izy ireo sisa. Ho azy ireo, nifarana ny taona 2008 ny fitondran'ny taranaka mpanjaka Shah. Ito ny sarin'ny Praiminisitra Chandra Shumsher Jung Bahadur Rana miaraka amin'ireo rahalahiny.
Praiminisitra Chandra Sumsher sy ireo rahalahiny tao Singha Durbar ny taona 1902
Vao 40 taona lasa izay, nadio sy tsy nisy fofona ny Renirano Bagmati sy ireo morony– tena mifanohitra ny amin'izao ankehitriny izao mihitsy.
46 taona lasa izay! Ghats manamorona ny renirano Bagmati, Kathmandu ny taona 1969. #Nepal (by Douglas Hall)
Toerana fatratra ho an'ny fitsangatsanganana, fivavahana sy fakàna saina ny Boudhanath Stupa voahodidinin'ireo tranobe avo ankehitriny.
Ny Boudhanath stupa, Kathmandu #Nepal ny taona 1950
Raha misy zorony efatra ireo sainan'ireo firenena rehetra, ny sainan'i Nepal ihany no tsy misy zorony efatra. Jereo hoe toy ny ahoana ny endriky ny saina teo aloha.
Sainam-pirenena Nepale talohan'ny taona 1962
Nalaza teny anivon'ireo mpanangona hajia ny hajian'i Nepal, indrindra ireo hajia voalohany indrindra tsy fahita firy ankehitriny.
Ireo hajia voalohan'i Nepal eo amin'ny pejy voalohany, taona 1881.
Tsotra tokoa ny endriky ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Tribhuvan, ny taona 1950, ny hany seranam-piaramanidina iraisampirenena teo amin'ny firenena.
Ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Tribhuvan nandritra ny fiandohàny ny taona 1950
Samy tamin'ny fiandohàny daholo, tsy ny indostrian'ny fitanterana an-habakabaka ihany fa ny fitaterana an-tanety ihany koa. Mampiseho topimaso ny fomba fandehanana lavitra tamin'izany andro izany ity sary eto ambany ity.
Ny fandehanana tany Nepal ny taona 1950
Ary ity sary ity, nalaina vao 30 taona lasa fotsiny izay, tany Bhaktapur an'ny Lohasaha Kathmandu, mampiseho lehilahy mitondra ny zanany anaty kharpan, fampiasa hitondràna legioma sy entana hafa no tena izy:
Lehilahy mitondra ny zanany (Kamal Binayak, Bhaktapur 1985AD)
Raha nampidirina taty afara ho ao anatin'ny tantara ireo fomba fitaterana hafa, lohany i Nepal tamin'ny lafiny “téléphériques”. Tena nalaza teo amin'ny tantaran”ny fitateraa tao Nepal ny “Téléphérique”-n'i Hetauda-Kathmandu, eto amin'ny sary eto ambany, izay tsy niasa izao tato ho ato.
Fiarandalamby Tramway manapaka ireo 67 miles (108 km eo ho eo) an'ny tendro sy ala mikitrok'i Nepal. [Hetauda – Téléphérique Kathmandu 1959]
Raha hijery sarin”i Nepal fahiny, mahaliana kokoa, araho ny Nepal in Pix ao amin'ny Twitter.